Ungayithola kanjani indawo yokuphumula i-VIP? | Izindaba Zokuhamba
Ungayithola kanjani indawo yokuphumula i-VIP?
Maria | | Izikhumulo zezindiza, Amathiphu, travel
Uma kukhulunywa ngokuhamba, ikakhulukazi lapho kufanele sithathe indiza yokuxhuma ukufinyelela lapho siya khona, ukulinda isikhathi eside kakhulu kungaba ubuso obubi kakhulu bendiza.
Yize sibheka izindlela zokuzijabulisa ngesikhathi sokulinda, kubonakala sengathi isikhathi asihambi futhi umzimba wethu awuqedi ukuhlala ezihlalweni zamakamelo ajwayelekile okulinda. Ukungasho ukuthi kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthola indawo yokuhlala phansi ukuze uphumule futhi ushiye izinyanda ezihamba nathi.
Kodwa-ke, izinto zihluke kakhulu ezindaweni zokuphumula ze-VIP. Bahlome ngakho konke ukunethezeka: osofa nezitulo ezithambile, ukufinyelela kwi-Intanethi, ukukhetha okuhle kwamakhofi amahle kakhulu… Kukhona ngisho namanye aqhubekela phambili futhi anama-buffet amaningi, ama-aquariums amakhulu, ama-sauna aseFinland kanye nemitholampilo yezokwelapha.
Kepha singawajabulela kanjani lama lounges amahle ukwenza izikhathi zokulinda ezikhumulweni zezindiza zibe yinjabulo? Qhubeka ufunde!
1 Ukudlula Kokubalulekile
2 Izinhlelo zokuthembeka kwezindiza
3 Kudlula usuku
4 Ama-lounges ahlukile e-VIP
5 Amakhadi okuthembeka ebhizinisini
7 Ukufinyelela okuqondile kuma-lounges e-VIP
8 Yiba umngane we-VIP
I-Priority Pass iyindlela engcono kakhulu yokukhohlwa ngamakamelo okulinda ajwayelekile futhi ichazwe njengenye yezinhlelo ezivame kakhulu kubagibeli emhlabeni jikelele. Ikakhulukazi kulabo abahamba kaningi.
Ngayo, ungafinyelela ngokushesha ngaphezu kwama-lounges e-VIP emhlabeni wonke. I-Priority Pass inamazinga amathathu ahlukaniswe ngokuphelele ngokwesabelomali samakhasimende.
Prestige: Kubandakanya ukuvakashelwa kwamakamelo we-VIP angenamkhawulo. Izindleko ngonyaka zama-euro angama-399.
I-Standard Plus: Ukuvakashelwa kwamahhala kwama-VIP angama-10 ngezindleko zonyaka ezingama-249 zama-euro. Ukuvakashelwa okungeziwe kubiza ama-euro angama-24.
Izinga elijwayelekile: Lokhu kudlula kubiza ama-euro angama-99 ngonyaka ngenkokhiso yama-euro angama-24 isikhathi ngasinye lapho ufuna ukusebenzisa igumbi le-VIP.
Izinhlelo zokuthembeka kwezindiza
Ngenxa yezinhlelo zokwethembeka ezindizeni esingajabulela ukuma ngazo zonke izinto zokunethezeka. Ngale ndlela, uma uhamba kakhulu ngendiza efanayo, ikhadi lelungu lizokuvumela ukuthi ufinyelele kuma-lounges e-VIP ezikhumulweni zezindiza ngaphandle kokukhokha i-euro eyodwa. Kuyafana futhi uma uhamba ngendiza noma isigaba sokuqala. Kuzwakala kukuhle?
Uma ungahambi kakhulu kepha ungafuni ukuhlupheka ngamahora ayi-7 egumbini lokulinda elijwayelekile, kungcono ukuthenga ukudlula kosuku olulodwa ukufinyelela amakamelo e-VIP.
Uma ubona kude futhi ukukwenza ngesikhathi, kungakubiza phakathi kwama-euro angama-20 kuya kwangama-80. Intengo enengqondo yokujabulela ukunethezeka okuphezulu ezindaweni zikanokusho futhi ufike lapho uya khona uphumule futhi ukhululekile.
Kunconywa kakhulu ukuthi ufinyelele egumbini lokuphumula le-VIP lendiza ohamba ngayo ngoba ngesikhathi sokukhombisa ithikithi kungenzeka ukuthi uzohlomula ngokukhushulwa okukhethekile noma isaphulelo.
Ama-lounges ahlukile e-VIP
Labo abanesabelomali esiqine kakhulu sokuhamba kufanele bazi ukuthi kunama-lounges e-VIP azimele lapho izindleko eziphezulu zivame ukuba cishe ngama-euro angama-20. Amaketanga ahamba phambili ahlinzeka lolu hlobo lwensizakalo yi-Premium Traveler, i-Plaza Premium ne-Airspace.
Kuzo ungathola konke okuphawula izindawo zokuphumula ze-VIP esikhumulweni sezindiza: umoya okhululekile, izihlalo zikhululekile nokunethezeka kokudla. Okuwukuphela kokubi ukuthi iningi lalawa ma-lounges azimele eduze ngaphambi kokuba mnyama.
Amakhadi okuthembeka ebhizinisini
Izinkampani ezithile zinikeza amakhasimende azo amakhadi okuthembeka awavumela ukuthi afinyelele ezindaweni zokuphumula ezithile ze-VIP ezikhumulweni zezindiza lapho usohambweni.
Izicelo zamaselula zingaba yisixazululo ezinkingeni zethu eziningi. Lokhu kunjalo ngeLoungebuddy, uhlelo lokusebenza olutholakalela i-Android ne-iOS olunikeza umhlahlandlela ophelele kuwo wonke amalounge e-VIP esikhumulweni sezindiza ngasinye.
Lolu hlelo lokusebenza lubandakanya izinsizakalo ezithakazelisa kakhulu, izithombe kanye namazwana ngama-lounges e-VIP futhi kukhombisa ukuthi yikuphi okufanelana kahle nezidingo zakho nemibandela ngokuchofoza okukodwa.
Ukufinyelela okuqondile kuma-lounges e-VIP
Okunye ongakwenza ukuya kwikhawunta yenkampani yezindiza esihamba nayo bese ucela indawo yokuphumula ye-VIP esigungwini. Esikhumulweni sezindiza esifanayo kungahle kube nezindawo zokuphumula ezahlukahlukene ze-VIP futhi zonke zinezinsizakalo nezigaba ezahlukahlukene.
Ukuyifaka kuzodingeka ukukhokha ivawusha. Intengo yale nsizakalo izoncika esigabeni segumbi le-VIP ofuna ukufinyelela kulo.
Yiba umngane we-VIP
Isinqumo sokugcina, inketho yokonga kakhulu naleyo edinga ikhala elingaphezulu. Umhambi ngamunye wekilasi lokuqala angaletha umngane nabo egumbini lokuphumula le-VIP abalithandayo. Labo abanekhono labantu bangazama ukuqala ingxoxo nomgibeli onjalo bese bezama inhlanhla. Uzokwazi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Ungayithola kanjani indawo yokuphumula i-VIP?
Imininingwane ewusizo yokuvakashela iNingizimu Korea
ISango Lezitezi Eziyisikhombisa ze-Alhambra lizovulelwa umphakathi ngoNovemba